नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): न्यायाधीश बमको हत्याको विरोधमा आइतबार देशभरका सबै न्यायालय बन्द गरिने
न्यायाधीश बमको हत्याको विरोधमा आइतबार देशभरका सबै न्यायालय बन्द गरिने
जुन देशमा सर्बोच्च अदालतको न्यायाधिश सुरक्षित छैन, जनताको के हालत होला ? कल्पना गर्नुस त !
अंग रक्षक महेश गिरी र सँगै रहेका कलाकार दिपकराज गिरीका बुबा रामजी गिरीको भने अस्पतालमा शल्यक्रिया
बंगलामुखी मन्दिरमा पूजा गरेर फर्कँदै गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको छ । न्यायाधीश बममाथि ललितपुरको शंखमुलस्थित यूएन पार्क नजिकै अज्ञात समूहले गोली हानेको थियो । आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएका न्यायाधीश बमको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उयपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । अत्याधिक रक्तश्रावका कारण बमको मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक भरत राउतले जानकारी दिनुभयो । पल्सर मोटरसाइकलमा आएको समूहले बा ८ च ९८५३ नम्बरको गाडीमा सवार बममाथि विहान ११ बजेतिर गोली प्रहार गरेको थियो । निकै साँघुरो सडकमा मोटरसाइकल आएपछि साइड दिन गाडी रोकेको समयमा बममाथि गोली प्रहार भएको थियो । न्यायाधीश बमको मुख, घाँटी, छाती र हातमा गोली लागेको प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्रप्रातप शाहले
सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिनु भएको छ । घटनास्थलमा ५ ओटा गोलीको खोकासमेत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनास्थलमा ‘अमर नेपाल’ नामक पार्टीको पर्चा भेटिएको छ । उक्त पर्चामा देशलाई अधोगति तिर धकेल्ने सबैको अवस्था यस्तै हुने उल्लेख छ । घटनामा न्यायाधीश बममा अंग रक्षक महेश गिरी र सँगै रहेका कलाकार दिपकराज गिरीका बुबा रामजी गिरीको भने अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दुबैको शल्यक्रिया भएको छ । उहाँहरुको अवस्था खतरामुक्त नरहेको बताइएको छ । बमका गाडी चालक अश्व लामालाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । न्यायपरिषद्ले महाअभियोग लगाउन सिफरिस गरेपछि बमले लामो समयदेखि काम गर्नु भएको थिएन । यसैबीच न्यायाधीश बमको हत्याको विरोधमा आइतबार देशभरका सबै न्यायालय बन्द गरिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गरी बमको शव भोलि श्रद्धान्जलीका लागि सर्वोच्चमा राख्ने र भोलि नै अन्तिम संकार गर्ने बताएको छ ।
डेढ वर्षदेखि कार्यालयमा नियमित जान छाडेका न्यायाधीश रणबहादुर बम बिहीबार बिहान ललितपुरको बंगलामुखी पुगेका थिए । बंगलामुखीमा पूजाआजा सक्दा बिहानको ११ बज्यो । त्यसपछि उनी त्यहाँबाट फर्के । साथमा उनका मिल्ने साथी रामजी गिरी -कलाकार दिपकराज गिरीका पिता), अंगरक्षक र गाडी चालक थिए । चालकसँगै अगाडि अंगरक्षक बसेका थिए । पछाडिपट्ट बम र गिरी ।
साँघुरो बाटो भएकाले गाडी सुस्त गतीमा थियो । शंखमूल पार्कमा पुगेपछि एउटा पल्सर मोटरसाइकल अगाडि आएर रोकियो । मोटरसाइकलमा दुईजना थिए । न्यायाधीशको अंगरक्षक ओर्ले र बाटो किन छेकेको भनेर सोधे । त्यसपछि मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले अंगरक्षकलाई गोली हान्यो । गोली चलेपछि बम र गिरी गाडीबाट निस्केर भाग्न खोज्दै थिए, त्यहीबेला उनीहरुमाथि पनि गोली वर्षा भयो । चालक आत्तिँदै भागे । अरु चाहिं गोली लागेर त्यहीं ढले । त्यसपछि वरपर जम्मा भएकाले गोली लागेकालाई अस्पताल पुर्याए । त्यसपछि प्रहरी पुगेर घटनास्थललाई नियन्त्रणमा लियो ।